First aid for Heimlich Maneuver, Choking and Seizure - Yangon Thu Michelle
© 2021 Yangon Thu Michelle. All rights reserved. Privacy and Policy.
First aid for Heimlich Maneuver, Choking and Seizure
Health, Video Feb 20, 2020
ဒီဗီဒီယိုက တချိန်ချိန်မှာ တပါးသူအသက်ကယ်တင်နိုင်ဖို့ အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၁၇ စစ်တမ်းအရ အစာနင်ပြီးသေဆုံးသူ ငါးထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။
မရည်ရွယ်ပဲသေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းမှာ အစာနင်မတော်တဆသေဆုံးမှုက လေးနေရာမြောက်မှာပါ။ ဒါကြောင့် မတော်တဆဖြစ်ချိန် အချိန်မှီမကယ်တင်နိုင်လို့ သေဆုံးရတာပိုများပါတယ်။ ဘေးလူအနေနဲ့ အစာနင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရင် ချက်ချင်းကူနိုင်မှ အသက်ကယ်နိုင်မှာပါ။
အကယ်လို့ အသက်ရှုရပ်သွားရင်တော့ အရေးပေါ်
အသက်ကယ်နည်း CPR (Cardiopulmonary resuscitation – နှလုံးအဆုတ်ပြန်လည်နှိုးဆွခြင်း) ကိုစတင်ပါ။ မြန်မာရုပ်ရှင်ထဲကလို ရင်ဘက်ကိုနည်းလမ်းမမှန် ဖိနေရင် မသေခင်နံရိုးအရင်ကျိုးမှာမို့ စနစ်ကျတဲ့ပုံစံကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို ရေနစ်ပြီး ပြန်ကယ်တင်တဲ့လူနာ နှလုံးရပ် အသက်ရှုရပ်သွားတာ သေချာတယ်ဆိုရင်လည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
နောက်ထပ် ကြုံတွေ့ရနိုင်တာက ဝက်ရူးပြန်ရောဂါသည်။ ဝေဒနာရှင်အနေနဲ့ ဘယ်အချိန် တက်မယ်/ဝက်ရူးပြန်မယ် ဆိုတာကို ကြိုမသိနိုင်ဘူး။ နေရာမရွေး အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ ဖြစ်နေတဲ့လူနာကိုတွေ့ခဲ့ရင် ကြားဖူးနားဝနည်းတွေနဲ့ အတင်းမလုပ်ပါနဲ့။ အရပ်ထဲကပြောသလို လက်တွေ ခြေတွေအတင်းဖြောင့်တာ ဆန့်တာတွေကြောင့် ခြေချောင်း လက်ချောင်းတွေကျိုး၊ ပါးစပ်ထဲ သော့ထိုးထည့်လို့ လူနာ သူ့ဘာသာသတိလည်လာတော့မှ သွားကျိုးကုန်တာ ပိုများပါတယ်။ ချက်ချင်းပျောက်အောင် ကူညီပေးလို့ မရတာမို့ လူနာသက်သာလာချိန်အထိ မထိခိုက်မိအောင်၊ အစာနင်ပြီးလည်ပြွန်မပိတ်အောင်အထိ စောင့်ရှောက်ထားရင် ရပါပြီ။
အသေးစိတ်ကိုတော့ ဗီဒီယိုမှာကြည့်ကြည့်ပါနော်။ ဒီလိုအခြေခံကျတဲ့ ဗဟုသုတအချက်တွေက တကယ်ကြုံလာရင် လူ့အသက်ကယ်တင်နိုင်တာမို့ share ပြီး မျှဝေလိုက်ပါဗျို့။ နောက်တစ်ပတ်ကြာသာပတေးနေ့မှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေ ကျန်သေးလို့ ပေ့ချ်ကိုလာလည်နော်။ တွေ့ကြမယ် …